ကက်သရင်းက de Medici: အစွမ်းထက်ပြင်သစ်ဘုရင်မ
အီတလီဖွား Renaissance ပုံ
ကက်သရင်းက de Medici တစ်အစွမ်းထက်အီတလီ Renaissance မင်းဆက်၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည် ဘုရင်မ သူမကတော်ဝင်အာဏာကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာပြင်သစ်၏။ သူမသည်ပြင်သစ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နှင့်သောသူမ၏သားသုံးယောက်အသီးအသီးအဘို့အအရွယ်မရောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကျော်နှင့်လည်းပြင်သစ်ဘုရင်မဖွစျလာသူသမီး, မာဂရက်, ကျော်အလှည့်အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ သူမသည်, အလေ့အကျင့်အတွက်ပါလျှင်မရခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံသုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းပြင်သစ်၏အုပျခဲ့သညျ။
သူမသည်မကြာခဏစိန့်ဗာသောလမဲနေ့အသတ်ခံရမှုသည်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ် ကက်သလစ် - Huguenot ပြင်သစ်တွင်ပဋိပက္ခဖြစ်။
သူမ၏အဘ၏နာယကခဲ့ Machiavelli နှင့်ကက်သရင်း Machiavelli နေဖြင့်အကြံပြုအာဏာရမဟာဗျူဟာအချို့ကိုလေ့ကျင့်နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
မိသားစုနောက်ခံနဲ့ Connections ကို
ကက်သရင်းရဲ့အဖေ Lorenzo II ကိုက de '' Medici, Urbino ၏ Duke နဲ့ Florence ၏အကဲအမှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ဦးလေးပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယို X ကိုကြီးနှင့် Lorenzo ၏တူပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ Clement VII ။ Lorenzo ရဲ့အဘိုး Lorenzo က de '' Medici Lorenzo အံ့ဖှယျဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ကက်သရင်းရဲ့တရားမဝင်ဝက်အစ်ကို, Allesandro က de '' Medici, Florence ၏ Duke ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကသြစတြီးယား၏မာဂရက်, ချားလ်စ် V ကို, သန့်ရှင်းသောဘုရားရောမဧကရာဇ်တစ်ဦးတရားမဝင်သမီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ (Allesandro ရဲ့မိခင်ဖွယ်ရှိအာဖရိကန်နွယ်ဖွားကျွန်သို့မဟုတ်ကျွန်ကြီးနှင့် Alessandro သည်သူ၏အာဖရိကန် features တွေအဘို့အ il မိုရိုကိုခေါ်ခဲ့သည်။ )
ကက်သရင်း၏မိခင်နှင့် Lorenzo ရဲ့ဇနီးသည်အဘယ်သူ၏ဖခင် Auvergne, အ Bourbon မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းများ၏အရေအတွက်ခဲ့ Madeleine de la ခရီးစဉ် d'Auvergne ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ရေး Francis ကပြင်သစ်နိုင်ငံ, ငါသူမ၏ဝေးလံသောဆွေမျိုးများနှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတို့အကြားတစ်ဦးမဟာမိတ်အဖွဲ့ခိုင်ခံ့စေဖို့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယိုက X နေဖြင့်စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Madeleine ရဲ့အစ်မ, အန်း, Auvergne အမွေဆက်ခံခြင်းနှင့်အယ်လ်ဘာနီ၏ Duke လက်ထပ်, ဒါပေမယ့်သူမတသက်လုံးသားမရဘဲသေဆုံးနှင့်သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကက်သရင်းတို့ကအမွေဆက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Madeleine ကက်သရင်းဘေးဥပဒ်, ဖြစ်ကောင်း puerperal အဖျားကနေ, ဧပြီ 13, 1519 မှာမွေးဖွား, ဒါမှမဟုတ်ဆစ်ဖလစ်သူမ၏ခင်ပွန်းထံမှကန်ထရိုက်ခဲ့သည်မကြာမီပြီးနောက်သေဆုံးသွားတယ်။
Lorenzo ကက်သရင်းအနေနဲ့မိဘမဲ့ထွက်ခွာဖြစ်ကောင်းဆစ်ဖလစ်ကနေမကြာမီအပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ (သူ့သင်္ချိုင်း Michelangelo ကပန်းပုတို့ပါဝင်သည်။ )
သူမသည်သူမ၏ဦးလေး, သူမဖတ်ပါနှင့်ရေးသားဖို့ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့လမျးညှနျမှုအောကျတှငျသီလရှင်များကဂန္ထဝင်ပညာရေးပေးထားခဲ့သည်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယို X တို့မှာ၏ညှနျကွားမှုအောကျတှငျသီလရှင်များအားဖြင့်ပညာတတ်ခဲ့သည်။
ကက်သရင်း 14 တုန်းက 1533 ခုနှစ်, သူမကဟင်နရီသည်ပြင်သစ်၏ရှင်ဘုရင်, Francis ကငါနှင့်သူ၏မိဖုရားကြင်ယာတော်, Claude ၏ဒုတိယသားမှလက်ထပ်ခဲ့သည်။ Claude လူးဝစ် XII နှင့်သတို့သမီးဖြစ်ခဲ့သည် Brittany ၏အန်း ။ Salic ဥပဒ ရာဇပလ္လင်သူ့ကိုယ်သူတို့ကိုအမွေခံရသောအနေဖြင့် Claude တားမြစ်သည်။
ဟင်နရီအိမ်ထောင်ရေး၏ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာမကြာခဏပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Clement ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ, ကက်သရင်းရဲ့ထောက်ခံမှုပျောက်ကွယ်, ဒါကြောင့်သူမ၏ဖှဲ့ကိုပြု၏။ အိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်ဝေးခဲ့သည်။ ဟင်နရီပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ညားစောင့်ရှောက်လျှင်, အထူးသဖြင့်အဆိုပါစုံတွဲသည်ဆယ်နှစ်သားမခဲ့ 1534. ပြီးနောက်ဒိုင်ယန်းက de Poitiers မျက်နှာသာ။
1536 ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီရဲ့အစ်ကို Francis ကသေနှင့်ကက်သရင်းဟာ dauphine ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမ၏အမှုထမ်းတဦး Francis ကအဆိပ်သင့်ခဲ့ကြောင်းတရားရုံးမှာသံသယရှိခဲ့သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာမှသူမ၏ပျက်ကွက်သူမဟင်နရီဖို့နဲ့ 14 ရာစုကတည်းကပြင်သစ်အာဏာရခဲ့ Valois ၏အိမ်မှအမွေခံ၏မိခင်အဖြစ်သူမ၏သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ကြောင်းဆိုလိုသညျ။
မိမိအညားတဦး 1537. ကက်သရင်းအတွက်သမီးနောက်ဆုံးတော့အချို့မူမမှန်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်စုံတွဲအချို့အကြံပြုချက်များကိုဖန်ဆင်းသူတစ်ဦးဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သူ့ကိုယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ပြီးနောက်ဟင်နရီဖယ်ကက်သရင်းချပြီးစဉ်းစား။ သူမလည်းအတူတိုင်ပင်နှင့် (သူမ Nostradamus တစ်နာယကခဲ့) နက္ခတ်ဗေဒင်၏အကြံပေးချက်ကိုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ 1543 ခုနှစ်တွင်သူမနောက်ဆုံးတော့သည်ပဋိသန္ဓေနှင့်ဟင်နရီရဲ့အဖေနှင့်အနှောင်းပိုင်းတွင်အစ်ကိုများအတွက်အမည်ရှိ 1544 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအသား, Francis က, ဘွားမြင်လေ၏။
Francis ကများ၏ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ကက်သရင်းဟင်နရီဖို့ကိုးကပိုကလေးများကိုဘှားမွငျ, သူတို့ခြောက်နို့စို့အရွယ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဆရာဝန်တွေထို့နောက် stillborn သူအမြိုးသားတစျဦး၏အရိုးတို့ကိုခြိုးဖောကျခွငျးအားဖွငျ့သူမ၏ဘဝသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်အခြားအမွှာထက်နည်းနှစ်လအကြာမှာသေဆုံးသောအခါသူမသည်အမွှာဆောင်သောပြီးနောက်မပိုကလေးများရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟင်နရီ Diane က de Poitiers နှင့်အတူအထူးသဖြင့်ညားခြင်းနှင့်အတူသူ၏ဆကျဆံရေးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဟင်နရီပြည်နယ်၏ကိစ္စရပ်များအပေါ် Diane တိုင်ပင်သော်လည်းကက်သရင်းဟင်နရီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုအတွက်မဆိုနိုင်ငံရေးသြဇာ၏ထွက်ကိုပိတျထားခဲ့သညျ။ ကက်သရင်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အိမ်တော်အဘို့ရှင်းလင်းစွာသူမ၏ preference ကိုဖန်ဆင်းသောအခါ, ဟင်နရီကက်သရင်းအားပေး၏။
ဟင်နရီသည်အဘယ်သူ၏မိခင်ဟင်နရီ၏အဆွေခင်ပွန်း၏နှမဖြစ်ခဲ့သည်မာရိသ, စကော့ဘုရင်မဖို့အကြင်သည်သူ၏အကြီးဆုံးသားနှင့် dauphin, Francis က, Francis က, သောအသွင်၏ Duke ရှိခဲ့ပါတယ်။ မာရိရဲ့မိခင်, သောအသွင်မာရိ, စကော့မာရိ, ဘုရင်မကြီးစဉ်အရွယ်မရောက်အဖြစ်စကော့တလန်အုပ်ချုပ်ခြင်း, dauphine ဖြစ်ကြီးပြင်းခံရဖို့ပြင်သစ်သို့ရောက်ကြ၏။
1559 ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီတစ် jousting ပွဲစဉ်များတွင်မတော်တဆမှုအပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ကက်သရင်းသူ့ကိုအောက်မေ့တစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျိုးလှံမွေးစားခြင်း, စိတ်မသာညည်းတွားအတွက်အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ရန်ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါပလ္လင်နောက်ကွယ်မှာပါဝါ: Francis က II ကို
ကက်သရင်းရဲ့သားအကြီးဆုံး, 15, ယခုညျရှငျဘုရငျခဲ့သညျ။ Lorraine ၏အသွင်နှင့် Cardinal ၏ Duke ကက်သရင်းအရွယ်မရောက်အမည်ရှိခံရပေမယ့်အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။ ကက်သရင်းကက်သရင်းလိုချင်ခဲ့သောအိမ်တော်ထဲကဒိုင်ယန်းက de Poitiers ejecting နှင့်ဒိုင်ယန်းကနေတော်ဝင်ရတနာရယူနေဖြင့်အချို့သောအာဏာကိုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ယင်းသောအသွင်မိသားစုပရိုအထက်တွင်ကက်သလစ်ဘာသာရာထူးတိုးအဖြစ်, ကက်သရင်းဟာအလယ်အလတ်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူ positioned ။ အများအပြားသေဆုံးခဲ့သည်ရှိရာပရိုအပေါ်တစ်ဦးအသွင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ကက်သရင်းပုဂ္ဂလိကပရိုကိုးကှယျခွငျးသည်းညည်းခံတစ်ဦးမူဝါဒကအနိုင်ရပြင်သစ်၏အဓိပတိနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Francis ကသူ့ကိုအောင်မြင်စရာကလေးတွေနဲ့အတူ, သာက 16 နှစ်ရှိပြီ, ဒီဇင်ဘာလ 1560 ခုနှစ်တွင်အနိစ္စရောက်လေ၏။ မိမိအမုဆိုးမနောက်နှစ်၏သြဂုတ်လအတွင်းပြန်စကော့တလန်မှစလှေတျတျောခဲ့သည်။
အဆိုပါပလ္လင်နောက်ကွယ်မှာပါဝါ: ချားလ်စ် IX
Francis ကကက်သရင်းရဲ့သားအကြီးဆုံးခဲ့သညျ။ Francis ကဒါဆိုသမီးနှစ်ယောက်, ဧလိရှဗနှင့် Claude, သူသည်နှစ်နှစ်နှစ်အရွယ်မှာရှေ့တော်၌သေသူတစ်ဦး၏သားလူးဝစ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သညျ။
လူးဝစ် 1550 ပြည့်နှစ်တွင်မွေးဖွားချားလ်စ်အားဖြင့်မွေးဖွားနိုင်ရန်အတွက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။
Francis က II ကိုသေဆုံးသောအခါသူ၏နောက်တစ်နေ့ကြီးကနျြအစ်ကိုချားလ်စ် IX အဖြစ်နန်းထိုင်၏။ သူသာကိုးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ဤအချိန်, ကက်သရင်းပါဝါနှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုး၏အများကြီးထိန်းချုပ်ထား။ ချားလ်စ် '' လူနည်းစုစဉ်အတွင်းကက်သရင်းအတူတကွကက်သလစ်နှင့်ပရိုတက်ရောက်စေဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် Vassy ၏အသတ်ခံရမှု, သောအသွင်များ Duke ခြင်းဖြင့်အစပျိုး, ဘာသာတရား၏ပြင်သစ်စစ်ပွဲများစတင်, ကိုးကှယျခွငျးမှာ 74 ပရိုသတ်ကြ၏။
အဆိုပါ Huguenots အင်္ဂလန်နှင့်အတူ aligned အခါ, ကက်သရင်းနှင့်တော်ဝင်စစ်တပ်ပြန်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကက်သရင်းအချိန်များအတွက်, စစ်ပွဲ၏ညှိနှိုင်းအဆုံးကိုမြင်တော်မူ၏။
1563 ခုနှစ်တွင် Charles IX အုပ်ချုပ်ဖို့အသက်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကက်သရင်းရဲ့လက်သို့အာဏာကိုအများဆုံးသွင်းထားလေ၏။ အဆိုပါ Huguenots နှင့်အတူစစ်ဆက်ပြောသည်။ ကက်သရင်း 1570 ခုနှစ်, သန့်ရှင်းသောရောမဧကရာဇ်, Maximilian II ၏သမီးတစ်ဦးမှချားလ်စ်လက်ထပ်နှင့်, ထို Huguenots နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်သူမ၏သမီး Valois ၏မာဂရက်အကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားစီစဉျပေးခဲ့နှင့် Navarre ၏ဟင်နရီ III ကို၏သား Jeanne d'Albret , သူ့အစ်မများကပြင်သစ်၏ Francis ကကျွန်မတစ်ဦး Huguenot ခေါင်းဆောင်များနှင့်တူမ Navarre ၏ Marguerite ။ သူမမာဂရက်သောအသွင်များ Duke နဲ့ကိစ္စရှိခြင်းခဲ့, သူ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာကက်သရင်းသူမ၏သမီးမှာစိတ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်။ Navarre ၏ဟင်နရီသည်ပြင်သစ်ပလ္လင်ကို၎င်း, ပိုကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ဖို့ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်, ကက်သရင်းသူမ၏သမီးအဘို့, အကဲဖြတ်။
, ဇွန်လ 1572 ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီနှင့်မာဂရက်၏မင်္ဂလာဆောင်များစွာကို Huguenot ခေါင်းဆောင်များ၏တက်ရောက်သူသည်စိန့်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပြီးသောအရာကိုအတွက်ကက်သရင်းရက်အနည်းငယ်နောက်ပိုင်းတွင် Huguenot ခေါင်းဆောင်များဆန့်ကျင်သိသိသာသာအရေးယူရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းခဲ့
ဗာသောလမဲအသတ်ခံရမှု, ထို့နောက်ပြင်သစ်မှတဆင့်ပျံ့နှံ့ကြောင်း, အူဘုရားကျောင်းခေါင်းလောင်း၏အချက်ပြနှင့်အတူစတင်ပဲရစ်သတ်ဖြတ်၏တစ်ပါတ်။
ချားလ်စ်ရှင်းလင်းစွာသူ့ညီ, ဟင်နရီ, ကက်သရင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးသားမှသူမ၏ရငျးနှီးမှုမနာလိုဖြစ်ကောင်း, သူ့မိခင်ကနေသူ့ကိုယ်သူဝေးကွာ။ ချားလ်စ်ပြည်နယ်၏အရေးကိစ္စများတွင်အနည်းငယ်သာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့အဖြစ်ဒါပေမယ့်ကက်သရင်း, အုပ်ချုပ်ဖို့ကလွယ်ကူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ချားလ်စ်တီဘီရောဂါ, မေလ, 1574 သေဆုံးခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုအောင်မြင်စရာတရားဝင်၏သားတို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိသမီး, Marie ဧလိရှဗ, 1573 တွင်မွေးဖွားသည်သူ၏တရားမဝင်သား, ချားလ်စ်, ကက်သရင်းက de Medici နှင့်Angoulême၏ Duke ကနေမြေယာနှင့်ခေါင်းစဉ်ကိုတို့ကိုအမွေခံရသော, Auvergne များ၏အရေအတွက်ဖြစ်လာခဲ့သည် 1572 ကနေ 1578. မှအသက်ရှင်။ ,
အဆိုပါပလ္လင်နောက်ကွယ်မှာပါဝါ: ဟင်နရီ III ကို
သူ့အစ်ကို, ချားလ်စ်, တရားဝင်အထီးအမွေခံမရှိဘဲသေဆုံးသွားသည့်အခါဟင်နရီဟင်နရီပိုလန်မှပြန်လာသောစဉ်ကက်သရင်းအချို့လအတွင်းအရွယ်မရောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် 1575. ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကဘုရင်ဖြစ်လာတယ်အချိန်တွင်လူကြီးခဲ့သော်လည်းကက်သရင်းကက်သရင်းရဲ့နှစ်ခုအဟောင်းသားတို့သမတူဘဲ, အထူးသဖြင့်နယ်လှည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်, ချားလ်စ် '' မင်းနန်းစံစဉ်ကာလအတွင်းများစွာသောအခန်းကဏ္ဍဝတ်ပြုကြ၏။
မယ်တော်နှင့်အတူ 1570 ခုနှစ်တွင်သူ့အဘို့ထိမ်းမြားလက်ထပ်စီစဉ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူး အင်္ဂလန်ဘုရင်မအဲလစ်ဇဘက်ငါ နှင့်မအောင်မြင်ခဲ့သောအခါသူမ၏အငယ်ဆုံးသားဧလိရှဗက်နှင့်အတူ Francis ကအတူတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားစီစဉ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲလစ်ဇဘက်, သူမနဲ့အခြား suitors နှင့်အတူရှိခဲ့အဖြစ်တစ်ဦးသည်အချိန်တလျှောက်ကစားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာအလှည့်စီနှင့်အတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုစွန့်ပစ်။
1572 ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီလစ်သူ၏ပိုလန်နှင့်က Grand Duke ၏ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပေမယ့်သူကသူ့အစ်ကိုသေဆုံးခဲ့ကြောင်းထွက်ရှာတွေ့သည့်အခါသူကပြင်သစ်သို့ပြန်သွား၏။ မိမိအရာဇဘိသိတ်ဖေဖော်ဝါရီလ 1575 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်, နက်ဖြန်နေ့ကသူ Lorraine ၏ Louise လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသားကိုမခဲ့ရပြီးဟင်နရီ Louise မှနာမည်ကြီးသစ္စာပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအကသူ၏ရန်သူများကိုသဖြင့်မဟာဗျူဟာအပြန့်နှံ့ခဲ့ကြပေမည်သော်လည်းသူသည်လိင်တူချစ်သူကြီးနှင့်အမျိုးသမီးသူတွေကိုအပြင်အထီးချစ်သူများရှိခဲ့အချို့ကောလာဟလရှိခဲ့သည်။
ကက်သရင်း, သူမ၏အခြားသားရှငျဘုရငျသသောအခါထက်လျော့နည်းတန်ခိုးနှင့်သော်လည်း, တဖန်နန်းစံ၏ဖြစ်ရပ်များအတွက်လည်းဤသားတစ်ခုတက်ကြွအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
1584 ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီရဲ့သာကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ညီအစ်ကိုချင်း, Francis က, သူ့ဟင်နရီ၏ညီမ (နှင့်ကက်သရင်းရဲ့သမီး) အားလက်ထပ် Navarre ၏ဟင်နရီ, မာဂရက်, Salic ဥပဒေအရလာမည့်အထီးအမွေဆက်ခံသူအောင်, တီဘီ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ မာဂရက်ပြင်သစ်မှပြန်လာသောနှင့်ချစ်သူများကိုယူသကဲ့သို့, ကက်သရင်းနှင့်မာဂရက်, စစ်တိုက်ကြ၏။ ကက်သရင်းနှင့်သူ၏သားကို-In-ဥပဒမာဂရက်ထောင်ချခံရနှင့်သူမ၏နောက်ဆုံးထုတ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ 1586. ကက်သရင်းသူမ၏အလိုတော်ထဲကမာဂရက်ရေးသားခဲ့သည်အတွက်ကွပ်မျက်ခံရကိုမြင်တော်မူ၏။
ရှငျဘုရငျကိုဖြစ်လာမီ, ဟင်နရီသည်ပြင်သစ်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ခဲ့များနှင့် Huguenots နှင့်အတူတိုက်ပွဲတချို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ကက်သရင်းဂေါက်အတူအတော်လေးအဝလွန်နှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူခဲ့, ဤတရားရုံးမှာတက်ကြွစွာသြဇာဖြစ်သူမ၏စွမ်းရည်ကိုလျော့။ 1588 ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီဟာ Duke နှင့်သူ၏အစ်ကိုတစ်ဦး Cardinal, အသတ်ခံရမှာပုဂ္ဂလိကအစည်းအဝေးသောအသွင်များ Duke ဖိတ်ခေါ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကက်သရင်းတစ်ဦးမြေးတို့လက်ထပ်ပြီးမှာနေမကောင်းကျသွားပြီးနောက်ဒီထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်သောအသွင်များ Duke ၏လူသတ်မှုအတွက်သူမ၏သားရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏သတင်းမှာပျက်စီးခဲ့သည်။
သူမသည်တစ်ဦးအဆုတ်ရောဂါကူးစက်မှုနှင့်အတူ bedridden နှင့်များစွာသောသူမ၏သားရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသူမသေဆုံးအလျင်အမြန်ယုံကြည်အတူဇန်နဝါရီလ 5, 1589 ရက်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သညျ။
ကက်သရင်းရဲ့သားဟင်နရီ III ကို Navarre ၏ဟင်နရီနှင့်အတူဟင်နရီရဲ့မဟာမိတ်ဆန့်ကျင်သူတစ်ဦးဒိုမီနီကန် friar အားဖြင့်လုပ်ကြံခံရသာရှစ်ပိုပြီးလအတွင်းနေထိုင်ခဲ့တယ်။ Navarre ၏ကက်သရင်းရဲ့သား-In-ဥပဒဟင်နရီသူ 1583 ခုနှစ်တွင်ကက်သလစ်ဘာသာကူးပြောင်းပြီးနောက်သာသရဖူဆောင်းနိုင်, ပြင်သစ်၏ဘုရင်အဖြစ်နန်းထိုင်၏။
သူမကြီးလည်းသူမအဖေ-In-ဥပဒေ, ပြင်သစ်၏ Francis ကကျွန်မအားဖြင့်မှုတ်သွင်းသော Medici Renaissance သမီးအဖြစ်, ကက်သရင်းပြင်သစ်မှပန်းချီနဲ့အနုပညာကိုရောက်စေဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။ သူမကသူ့သား '' အမည်များအတွက်အုပ်ချုပ်နေစဉ်သုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းသူမကအဆောက်အဦများနှင့်အနုပညာအလုပ်အပေါ်ပြန့်ပွားနေခဲ့ရသည်။ သူမသည်ပဲရစ်အတွက် Tuileries နန်းတော်တိုးချဲ့နှင့်များစွာသောဒဏ်ငွေစာအုပ်တွေစုဆောင်း။ သူမသည်တရုတ်နှင့်ရောင်စုံစုဆောင်း။ ပထမတော့သူမသည်အီတလီအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသောပြင်သစ်အနုပညာရှင်ထောက်ခံပြီးတော့, အီတလီအနုပညာရှင်များနှင့်ဗိသုကာအတွက်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ သူ Francois Clouet ဥပမာ, ကက်သရင်းရဲ့မိသားစုအများစု၏ပုံတူပန်းချီကား။ သူမ၏တရားရုံးပွဲတော်များသူတို့ရဲ့ညားဘုန်းလူသိများခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Valois မင်းဆက်၏အဆုံးအစကက်သရင်းကောက်ယူခဲ့သောအနုပညာအများကြီးများ၏ရောင်းရငွေမှဦးဆောင်ပြုလုပ်အကျပ်အတည်းများကိုဆိုလိုအဖြစ်သာတရားရုံးပွဲတော်များ, ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ဆက်ပြောသည်။
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး Timeline ကို: နောက်ခံ Pre-1789
300 Spartan Thermopylae ကိုင်ထားခဲ့သလား The Legend နောက်ကွယ်မှာအမှန်တရား
ရောမကဗျာဆရာ Horace ကဘယ်သူလဲခဲ့သလား
ထိပ်တန်း 11 စာအုပ်များ: ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းအမျိုးသမီးများ
မကောင်းပါ Lab မှအပေါင်းအဖေါ်များနှင့်အတူဖြေရှင်းနည်းလုပ်နည်း
Americium ကိုအချက်အလက် - Element ကို 95 သို့မဟုတ် Am
ထိပ်တန်း Fantasy ရုပ်ရှင်-ကြည့်ရှုပါရှိရမည်
နိုက်ထရိုဂျင်အခြေစိုက် - အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ
Lamma ဟင်းချက် & ချက်ပြုတ်နည်း
အတွေ့အကြုံများ၏-ခန္ဓာကိုယ်-out - စစ်မှန်သောပုံပြင်များ
စီးပွားရေးအရကားချို Fix ဖို့ကိုဘယ်လို။
အဆိုပါ 2016 သမ္မတအိမ်တော်လူမျိုး၏အကျဉ်းချုပ်
တစ်ဦး Scorpio / Pisces ဆက်ဆံရေး၏မြင့် & စိတ်ဓာတ်
ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်သင်္ချိုင်းတွင်းဖွ (မာကု 16: 1-8)
တက္ကသိုလ် Hartford ၏အဆင့်လက်ခံရေး
ဘာ Submerged ATV နှင့်အတူလုပ်ပါရန်